Icedove: u soo dir macmiilka ka caawiya hagaajinta wax soosaarka shaqada | Laga soo bilaabo Linux
Icedove waa iimeel furan oo furan, wargeys kooxeed iyo macmiil RSS ah oo si gaar ah loogu talagalay Linux qaybinta iyadoo lagu saleynayo Debian GNU / Linux. Waxay ku saleysan tahay koodhka ilaha Mozilla Thunderbird.
Sida Iceweasel marka loo eego Firefox, astaamaha ganacsiga (Thunderbird iyo astaanta) waa la tirtiray maaddaama shuruudaha qaybinta aysan aqbalin DFSG.
Tani waa tabarucaad ka yimid Javier Piendibene, sidaas darteed wuxuu noqonayaa mid ka mid ah guuleystayaasha tartankeena toddobaadlaha ah:La wadaag wixii aad ka ogtahay Linux«. Hambalyo Javier!
Haddii aad tahay isticmaale GNU / Linux, waxay u badan tahay inaad Icedove u isticmaashid macmiil ahaan iimaylka kombiyuutarkaaga gaarka ah.
Haddii aad xafiiska kujirtana ... waxay u egtahay inay shirkadaadu kugu qasbeyso inaad isticmaasho nidaamyada hawlgalka ee lahaanshaha iyo baakado, kuwaas oo aan lahayn dabacsanaanta uu qofku kula qabsado adduunka xorta ah.
Laakiin ma ahan wax aan macquul aheyn, maadaama dulqaad yar, Icedove / Thunderbird loo isticmaali karo jawi shabakadeed shirkadeed oo ay ku badan yihiin Microsoft Active Directory iyo Exchange / Outlook.
Si aan ugu adeegsan karno Icedove / Thunderbird bey'addan, waa inaan adeegsanno barnaamij gaar ah oo u shaqeyn doona sida irrid u dhexeysa Active Directory / Exchange iyo macmiilka emailkeena, oo lagu magacaabo DavMail Gateway. Qaabka loo qaabeeyo nidaamka deegaanka Debian ee aan inyar ka hor halkan ku dhajiyay: http://wiki.debian.org/Exchange_GAL_desde_IceDove
Faa'iidada weyn ee 'Icedove / Thunderbird' waa kuwa lagu daro (ama "plugins"), taas oo kuu oggolaaneysa inaad wax ka beddesho dhaqanka maareeyaha boostada si aad ugu haboonaato midka ugu baahida badan.
Kuwa aan u adeegsado ujeeddooyin shaqo waa kuwan soo socda:
Qalabka FolderPane, waxay kuu ogolaaneysaa inaad habeyso nidaamka akoonnadaada emailka ee kala duwan, qeex kan aad u isticmaali doontid sida caadiga ah iyo habka loo soo bandhigo. Aad waxtar badan u leh marka qofku la shaqeeyo dhowr xisaabood. Xaaladdayda, oo leh laba koonto oo shirkadda gudaheeda ah oo hoos yimaada Sarrifka, iyo afar ka baxsan oo ku yaal shabakadda.
LDAP - Fiiri Xubnaha Kooxaha, waxay u oggolaaneysaa in la daawado xogta xubnaha diiwaanka LDAP ee ay isticmaashay shirkadda.
gContactSync, isku dubbaridi xiriiriyahaaga macmiilka meelihii aad kula xiriiri lahayd Google.
Tabarka Kalandarka Google, ku dar macmiilka iimaylka tab ay la socdaan faahfaahinta jadwalkaaga guud ama kuwa gaarka loo leeyahay ee Google.
Bixiyaha Kalandarka Google, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad maareeyso jadwalka taariikhda dadweynaha iyo kuwa gaarka ah ee ku saleysan websaydhka Google macmiilka boostada.
onkod, waxay ku darsataa shaqeynta bog baarista websaydhada macaamiisha boostada, sidaa darteed muhiim maahan in la furo barowsar dibadeed si loogala tashado xiriirada la helay.
Soo DejisoExportTools, waxay kuu ogolaaneysaa inaad wareejiso oo aad ku qabato faylasha emaylka qaabab kala duwan, ama inaad u wareejiso kumbuyuutar kale ama aad u sameysato nuqullo nuqul ah
Adigana, maxay yihiin waxyaalaha lagu daro ee Icedove / Thunderbird uusan seegi karin si kor loogu qaado wax soo saarka shaqada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Icedove: iimayl u dir macmiilka ka caawiya hagaajinta wax soosaarka shaqada
Markii hore ma aysan qiil bixin magacyadan debian-ka, hadda oo loo adeegsado Firefox-ka cusub ee wax diraa ogolaansho la'aan, waan ku raacsanahay iyaga. Waa la furi karaa laakiin cidina ma weydiisan inay halkaas joogaan, waa heshiisyo maldahan oo dalal badan ka mamnuuc ah.
Xidhiidhka shabakada 'Debian Wiki' ayaa leh khalad yar; halkii Icedove, waa inaad dhahdaa IceDove (oo leh caasimada D), sidan oo kale:
Ku jawaab Carlos Arturo
Firefox cusub oo wax u dirta ogolaansho la'aan?
Maxaad uga jeeddaa?
Ma aqaano haddii aad haysato buugga isticmaalaha ama sida aad ugu raadiso isticmaaleyaasha LDAP kordhinta LDAP. Sidaas ayaan uga faa'iideysan karnaa helitaanka xiriirada iyo barashada sida loo isticmaalo.
Waad ku mahadsantahay kordhinta habka, dhowr jeer ayaan adeegsaday qaar badana way waxtar leeyihiin in la iswaafajiyo xiriirada iyo macluumaadka dhoofinta, laga yaabee inaan kaa caawin karo soo dejinta / dhoofinta markii waqtigu ii ogolaado =) (Y) ...
Raadinta isticmaaleyaasha ka badan LDAP waa hufan. Markaad sameysid farriinta, intaad magaca qoreyso, waxaa soo baxayo isku dhacyo. Ama waxaad aadeysaa buugga cinwaanka, oo u isticmaal sidii caadiga ahayd galka GAL.
La saxay! Mahadsanid!
Waxaan u maleynayaa inaad tixraacdo waxa ka muuqda sawirka, iyagu waa la kartiyeeyaa markii hore laakiin waa la naafoobi karaa.